गठबन्धन स्वाभाविक नै हो | चितवन पोष्ट
गृह » गठबन्धन स्वाभाविक नै हो
राजनीति हर सम्भावनाहरुको खेल हो । तर, सम्भावनाको पाइला चाल्दा जनताको हित, समाजको उन्नति र राष्ट्रको समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा यसको भने कमी नै छ । दलहरु मिल्छन, फुट्छन । दलका हर मिलन र बिछोडमा देश र जनताका लागि भन्ने शब्द र वाक्य नपर्ने होइन । तर, यो देशमा सबैभन्दा हेपिएको, थिचिएको र बिर्सिएको जनता नै हो ।
देशमा यो वर्ष एकपछि अर्को चुनाव हुँदै छ । वैशाखदेखि सुरू भएको स्थानीय चुनाव असोजमा आएर बल्ल सकियो । अब कात्तिकमा अर्को चुनाव संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको औपचारिक माहौल सुरू हुने छ । यो मंसिरसम्म चल्ने छ । अहिलेसम्मलाई मंसिरका दुई दिन मतदानको मिति तोकिएको छ । त्यो बेलाका लागि कात्तिकमै उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । कात्तिकमा हुने उम्मेदवारी दर्ताका लागि दलहरुले भदौबाटै तयारी सुरू गरे । असोज आधा हुँदा नहुँदै चुनावी रणनीतिहरु पनि बनाए ।आउँदो मंसिरको चुनाव होला कि नहोला ? भन्ने आशंकाको बादल खासै छैन । नेपालको राजनीतिमा देखिएको यो सुखद पक्ष पनि हो । नभए, ५१ सालपछिका हर आवधिक निर्वाचन मिति घोषणा भए पनि समयमै नभएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । यही स्थानीय तहको निर्वाचन पनि घोषित मितिमा होला नहोला भन्ने ठूलो आशंका सबैको मनमा थियो । तर, अहिले चुनाव बिथोल्छौँ, हुन दिँदैनौँ भन्ने ठूलो शक्ति सतहमा आएको छैन । त्यसैले, निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका अहिलेसम्मलाई छैन ।
यो चुनावमा नौलो पक्ष के पनि हुने छ भने दलविशेषभन्दा पनि दलहरु सम्मिलित गठबन्धनहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएको छ । स्थानीय चुनावसम्म तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र अब आउँदो चुनावमा एक भएर जाने निर्णय गरेका छन् । माओवादीसँग तर्केर हिँडेका बाबुराम भट्टराई पनि यही मोर्चामा आएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र तथा बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको नयाँ शक्ति पार्टीका बीचमा बृहद् चुनावी मोर्चा बनेको छ । यो चुनावी मोर्चा मात्रै नभएर पार्टी नै एउटै बनाउने तयारीसमेत हो भनेर नेताहरुले भनेका छन् । दसैँका बेलामा भएको यो मोर्चा गठनले राजनीतिमा उछाल ल्याएको छ ।दसैँ भनेको आफन्तबीचको मिलनको पर्व पनि हो । मनमुटाव भएका आफन्तसँग नजिक हुने अवसर पनि दसैँ नै हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो दसैँमा लामो समयपछि टीकाजमरा मात्रै लगाएनन् राजनीतिक मनमुटाव चुलिएको पार्टीसँग पनि गठबन्धन गरेका छन् । चुनावका लागि वाम पार्टीहरुमा यस्तो गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले सुरूमा चित्त दुखायो । यो गठबन्धन देशको हितमा नभएको समेत भन्यो । र पछि, आफ्नो नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बनाउने तयारी सुरू ग¥यो ।
संविधानले जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ, त्यसले कुनै एक दलविशेषको बहुमत आएर एकल सरकार गठन गर्ने सम्भावनालाई रोकेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाका लागि कायम छ । यसले गर्दा केन्द्र अर्थात् संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार बनाउन कसैको बहुमत पुग्दैन । यस्तो बेलामा चुनावपछि सरकार गठनका बेला एकभन्दा धेरै पार्टीहरु मिल्न आवश्यक हुन्छ ।
चुनावपछि मिल्नुपर्ने अवस्था आउने नै थियो भने चुनावअघि नै मिल्नु नराम्रो हैन । गठबन्धन बनाएर ठोस योजना र कार्यक्रमका साथ जनतामा गए छनोटको अवसर पनि बढ्छ । त्यसैले, चुनावका लागि बनेको गठबन्धनलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो चलन छिमेकी देश भारतमा पनि रहँदै आएको छ । त्यहाँ पनि दुई खालका गठबन्धनहरु देखिने गर्छन् । एउटा गठबन्धन त्यहाँको कांग्रेस पार्टीले र अर्को गठबन्धनको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीले गरेको देखिन्छ । यी दुई पार्टीको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु कहिले यता त कहिले उता गरेकै हुन्छन् । केन्द्रीय चुनावका लागि मात्रै होइन, राज्यको चुनावमा पनि गठबन्धन हुन्छ ।
जस्तै गत वर्ष बिहारमा सम्पन्न चुनावमा लालु र नितिसको पार्टीले महागठबन्धन बनाए । अत्यधिक बहुमत पनि ल्याए । तर, मुख्य मन्त्री बनेको वर्षदिन पनि नहुँदै नितिसकुमार लालुलाई छाडेर भारतीय जनता पार्टीसँग मिल्न गए । यहाँ स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग मिल्न गएको माओवादी केन्द्र अहिले एमालेसँग मिल्न आएको छ । भारतीय राजनीतिको प्रभाव नेपालमा पर्छ भनिन्छ । गठबन्धनको गठन र विघटनमा पनि उताकै उदाहरण यता दोहोरिन थालेको छ ।
अबको चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरु मत माग्दै तपाईं हाम्रो घरदैलोमा आउने छन् चाँडै नै । अनि, हामी गम खाने बेला हुने छ । हैन, हिजो आपसमा मिल्न नसकेका यी पार्टीलाई केले मिलाएको होला ? भन्ने प्रश्न मतदाताको मनमा अवश्य उब्जने छ । यसको प्रस्ट जवाफ जुन गठबन्धनले दिन्छ, उसैको उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना रहने छ । तर, चुनावी वातावरण यो तरिकाले जाला वा नजाला भन्ने पनि छ । नेताले हर मतदाताको चित्त बुझाएर मत खाएको कहाँ नै छन् र ? अर्कोतर्फ, मतदाता पनि नेतालाई हायलकायल पार्ने प्रश्न सोध्न पनि कहाँ सक्षम छन् र !
यस्तो अवस्थामा नेताहरुले जनता, देश र समाजको स्वार्थलाई केन्द्रमा नै राख्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । गठबन्धनले नेतालाई सुरक्षित बनाएको छ । नेताकै चाहना र स्वार्थलाई संरक्षण गर्न एक वा अनेक खालका गठबन्धन बनेका हुन् । ती गठबन्धनलाई जनताको पक्षमा ढाल्न बाध्य बनाउने भनेको मतदाताले हो । हामी नेपाली मतदातासँग त्यो तागत छ वा छैन ? हेर्ने बेला आएको छ ।
नेपाली आकासमा मडारिइरहेको उत्तरी र दक्षिणी वायु